9-ka bog ee ugufiican ee wax looga beddelo sawirrada khadka tooska ah sida pro | Abuurista khadka tooska ah
Markaad la shaqeyneyso sawirrada, haysashada tifaftiraha sawirku waa muhiim, maadaama ay tahay aaladda shaqadaada. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waqtiyo, sababtuna tahay inaadan ku jirin kumbuyuutarkaaga weyn, maxaa yeelay xusuus kuma lihid PC-ga, ama sababo kale awgood, waxaad u baahan tahay tifaftiraha sawirka internetka inuu shaqeeyo.
Kahor, gaaritaanka tan ma ahayn wax fudud, in aan la dhaho ma aysan ahayn heer barnaamijyada aad ku rakibtay kombuyuutarkaaga. Laakiin waxyaabo badan ayaa is beddelay oo waxaad ka heli kartaa fursado badan oo iska soo horjeeda, ama mararka qaarkood xitaa ka badan, kuwa lagu rakibi karo. Ma rabtaa inaad ogaato maxay yihiin xulashooyinka aan soo jeedineyno?
1 Pixlr, tifaftiraha sawirka tooska ah ee khadka tooska ah
3 Photoshop Express, Tifatiraha sawir qaadaha tooska ah ee Photoshop
4 Sawir qaade
9 Fotoflexer, oo ah tifaftire sawir qaade khadka tooska ah ku shaqeeya
Pixlr, tifaftiraha sawirka tooska ah ee khadka tooska ah
Tifatirahaan sawir qaadka ah ee khadka tooska ah waa mid ka mid ah kuwa ugu cadcad kuwa ku shaqeeya sawirada qadka leh maxaa yeelay waa mid ka mid ah qalabka ugu dhameystiran ee aad ka heli doonto. Marka horeba, runtii maahan hal barnaamij halkii se, laakiin waxaa jira laba. Marka hore waxaad yeelan doontaa Tifatiraha Pixlr, oo aad ugu eg Photoshop sidaa darteedna aad u dhakhso badan inaad la shaqeyso oo aad fahanto.
Waxa aan ugu jeclaanay barnaamijkan ayaa ah wuxuu awood u leeyahay inuu lakabeeyoSi kale haddii loo dhigo, adigoo og sida loo dhajiyo sawir iyada oo loo marayo lakabyo ka dibna iska tuuro mid ama midka kale adigoon shaqada qabsan mar labaad bilowga.
Ikhtiyaarka kale ee Pixlr waa Pixlr Express. Waxay leedahay codsi ka fudud, maadaama ay ku saleysan tahay oo keliya afar arrimood: qor qor, hagaaji sawirka, ku dar saamaynta oo ku dar istiikarka. Ku habboon tahay marka aadan u baahnayn inaad wax taabato.
Isaga waxaa yaqaan dhammaan naqshadeeyayaasha garaafka. Xaqiiqdii, niche ayaa laga sameynayaa qaybo badan oo badan sida daabacaadda, suuqgeynta, iwm. Taasi waa sababta ay tahay inaadan indhaha ka qarsan.
Way ku habboon tahay, tusaale ahaan, dukaamada khadka tooska ah uga baahan waxyaabaha ku jira shabakadaha bulshada ama baloogyadooda. Waad awoodaa hel daboolida shabakadaha, madaxyada, boorarka ... Kaliya waa inaad doorataa cabirka aad rabto oo aad kudartaa waxaad ubaahantahay. Hadana haddii aan laguu waxyoon, waxaad adeegsaneysaa tusaalooyinka horay loo qorsheeyay oo aad u habeyn kartaa sida aad jeceshahay. Sida ugu fudud ee taas!
Photoshop Express, Tifatiraha sawir qaadaha tooska ah ee Photoshop
Haddii aad tahay qof jecel Photoshop, waxaad u badan tahay inaadan jeclaan doonin barnaamijyada kale gabi ahaanba waligoodna waxaad ku dhamaan doontaa inaad la shaqeyso. Laakiin waa inaad ogaataa inaad haysato ikhtiyaarka tifaftiraha sawir qaadaha ee Photoshop. Gaar ahaan waxaa loo yaqaan Photoshop Express waana nooc ka fudud kan aad taqaan, laakiin weli waa ku filan yahay inaad si heer sare ah ula shaqeyso isaga (kuma yeeri karno xirfadle maxaa yeelay way kugu gaabnaan kartaa iyadoo aan la helin lakabyo iyo xulashooyin kale oo muhiim ah).
Maaddaama waxa kor ku xusan hubaal ay kaa niyad jabeen, waxaan isku dayeynaa inaan wax ka beddelno. Tan awgeed, sida tafatiraha sawir qaade ee khadka tooska ah waxaan soo jeedineynaa Photopea, oo ah aad ugu eg Photoshop. Xaqiiqdii, is dhexgalkiisu wuxuu aad ugu eg yahay kan oo waxaad haysataa qalab badan oo horumarsan.
Intaas waxaa sii dheer, taageerada qaababka muuqaalka kala duwan, laga soo bilaabo PSD ilaa RAW, XFC ... waa lagu daray oo aadan ka helin barnaamijyada kale ee muuqaalka tooska ah, oo lagu daro lagu daray.
Haddii aadan u isticmaalin lakabyada ku jira sawirrada, tan tan dhib badan kuma qabsan doontid qabashadeeda, maxaa yeelay way fududahay in la isticmaalo iyo in la fahmo suurtagalnimada ay ku siinayso.
La interface waa cad yahay oo aad ugu eg Photoshop. Waxaad yeelan doontaa lakabyo, haa, laakiin maahan dhammaan shaqooyinkii aad kula soo barteen iyaga. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay miirayaal, hagaajin, isbeddello ku yimaada sawirrada ...
Iyo tan ugu fiican, waxaa lagu heli karaa 18 luqadood, sidaas darteed Isbaanishku wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah.
Fotor waa wax qaali ah kuwa aan laheyn qadka internetka ee aad u dheereeya ama dhibaatooyinka ku qaba xasuusta PC-ga, maxaa yeelay waa mid aad u dhakhso badan, kana badan tifaftireyaasha kale ee khadka tooska ah ku jira, taasna lafteeda ayaa ah in la doorto.
Heer farsamo, waad awoodi doontaa inaad kala shaqeysid moobaylkaaga, kaniinigaaga ... waxayna kuu ogolaaneysaa inaad sameysid koolaj, aad tafatirto sawir ama xitaa aad wax sameysato. Intaa waxaa sii dheer, waxay leedahay shaqeynta waxqabadka HDR, taas oo aad ku heli doontid natiijooyin sawirradaada ah oo leh tayo ka duwan tayada sare.
Xaaladdan oo kale waxaad haysataa nooc bilaash ah iyo barnaamij ay ku darayaan waxyaabo dheeraad ah.
Tifatiraha sawir qaadaha ee internetka oo leh magac ku xusuusinaya adiga Pokémon runti waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee khadka tooska ah. Iyo, ka mid ah faa'iidooyinkeeda, waa xaqiiqda ah inay kuu oggolaanayso inaad rakibto fiilooyin, miirayaal ama mawduucyo beddelaya is-dhexgalka. Si kale haddii loo dhigo, waxaad awoodi doontaa inaad u sheegto barnaamijka sida aad u rabto inay adiga kuu noqoto, adoo u habeeya.
Dabcan, nasiib daro qalabka ay heysato waa aasaasi, laakiin haddii aadan u baahnayn inaad wax badan la shaqeyso sawirrada waxay noqon kartaa xulasho wanaagsan oo aad ku shaqeysid iyo, si kadis ah, ugu samee sida aad jeceshahay
Tifatirahaani wuxuu ku habboon yahay kuwa ku cusub adduunka ee wax ka beddelka sawirka maxaa yeelay waxay kuu oggolaaneysaa inaad si dhakhso leh oo macquul ah u shaqeyso, barashada adeegsiga dhammaan qalabka aad haysato. Dabcan, sidaan soo sheegnay, kaliya ku habboon kuwa bilowga ah, maxaa yeelay ma laha qaabab aad u tiro badan oo lagu keydin karo sawirrada (ama in la furo).
Intaa waxaa dheer, waxay leedahay laba dhibaato oo muhiim ah: in shaashadda buuxda la kiciyo oo keliya haddii aad isdiiwaangaliso; iyo in ay tahay oo kaliya Ingiriisi. Ku dar taas xaqiiqda ah inay leedahay xayeysiis, taas oo kaa dhigi karta inaad mashquuliso markaad la shaqeyneyso sawirrada.
Fotoflexer, oo ah tifaftire sawir qaade khadka tooska ah ku shaqeeya
Ugu horreyntii, waxaan kugula talineynaa, markaad isticmaaleyso FotoFlexer, inaad ku sameyso luuqad aan Isbaanish ahayn. Sababta ayaa ah inaysan caddeyn sababta, laakiin nooca Isbaanishka ee barnaamijku ma lahan dhammaan xulashooyinka aad ka heli karto kuwa kale. Marka si aad u isticmaasho qalabka oo dhameystiran, waxaa fiican inaad ku soo dejiso Ingiriis, tusaale ahaan (waxaad haysataa 21 luqadood oo kale oo aad kala dooran karto).
Taasi waxay tiri, tifaftiraha sawir qaadaha ee internetka waa midka ugu fiican, in kastoo ay tahay adag tahay in la fahmo marka hore maxaa yeelay interface-ka uma eka Photoshop (waa mid shaqsiyadeed) Waa lacag la'aan oo waxaad leedahay faa'iidada ah inaad awood u yeelato inaad sawirrada ka soo dejiso kombuyuutarkaaga (kiniin, moobiil ...) ama url ama shabakadaha bulshada.
Haa, waxay leedahay lakabyo lagu daro sawirrada.
Waxaa jira fursado badan oo dheeri ah oo aad isku dayi karto. Waxa muhiimka ah ayaa ah inaad ogaatay taas, xaqiiqda ah inaadan ku rakibi karin kumbuyuutarkaaga micnaheedu maahan inaad la shaqeyn karin sawirada laga helo tifaftiraha sawirka tooska ah ee internetka, kaliya waa inaad heshaa midka ku habboon waxa aad rabto inaad ku gaarto taas. barnaamijka internetka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » 9-ka bog ee ugufiican si aad sawirro khadka tooska ah ugaga beddelaan
5 webs oo ah sawirro laba jibbaaran oo diyaar u ah in la soo dejiyo